UPDATE: Muxuu ka yiri guddiga dib u heshiisiinta beelaha Galmudug khilaafka soo kala dhexgalay? | HalQaran.com
UPDATE: Muxuu ka yiri guddiga dib u heshiisiinta beelaha Galmudug khilaafka soo kala dhexgalay?
Galmudug (Halqaran.coom) – 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya inuu jiro khilaaf ka dhex curtay Guddiga dib u heshiisiinta Maamulka Galmudug, ayaa masuuliyiinta Guddigaasi waxa ay beeniyeen inuu jiro Khilaafkaasi.
Guddoomiyaha Guddiga Shirka Dib u heshiisiinta Maamulka Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo qaban qaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug, islamarkaana dad warxumo tashiil ah ay sheegayaan in uu jiro khilaaf ka dhex-jira Guddiga, isaga oo sheegay in warkaasi aan waxba ka jirin.
Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa sheegay inay jiraan dad faafinaya dacaayado raqiis ah oo sheegaya inuu jiro khilaafkaasi, islamarkaana arrintaasi loo baahan yahay in laga waantoobo.
”Qabanqaabada shirkaas waxey mareysaa gabangabo. War-xuma tashiilka iyo dicaayadaha been abuurka ah waa in laga waantoobo oo danaha dadka Reer Galmudug loo tura oo aan lagu milqin khilaafaadka siyaasadeed” ayuu yiri Guddoomiye Baadiyoow.
Xoghayaha Guddiga qaban qaabada shirka Dib u heshiisiinta Galmudug ayaa sheegay in uu jiro khilaafka guddiga,isla markaana labo ay u kala qeybsameen.
guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug
Khilaafka soo kala dhexgalay